Douglas Costa oo ka hadlay wararka la xiriirinaya kooxda Manchester United – Gool FM
(Turino) 10 Sebt 2019. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda Juventus ee Douglas Costa ayaa ka hadlay wararka sheegaya inuu xiriir la leeyahay Manchester United iyo suurtogalnimada uu ugu wareegi karo garoonka Old Trafford.
Douglas Costa oo beeniyay haddalkan, ayaa tilmaamay inuu doonayo sii joogi taanka kooxda reer Talyaani ee Juventus, isla markaana uu la qaado koobab badan.
Warar badan ee horey ayaa waxay sheegayeen in kooxda Manchester United ay si xoogan u dooneyso inay la saxiixato Douglas Costa, balse Bianconeri ay ku adkeysatay inuusan bixin.
Laakiin ugu dambeyntii xiddigii hore kooxda Bayern Munich ayaa gabi ahaanba beeniyay arintan, wuxuuna balan adag la galay kooxdiisa Bianconeri, kaddib markii boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka uu ku soo qoray:
“Waxaan u qorayaa si aan u beeniyo wararka aan sal iyo raad laheyn ee la baahiyay, isla markaana lagu sheegay inaan wadahadal kula jiray kooxaha qaar inta lagu guda jiray suuqii dhawaa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga”.
“Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka, waxaan u muuqday mid iska cad, waxaan cadeeyay rabitaankeyga ah inaan la sii joogo kooxda Juventus si aan koobab ugu guuleysto, iyo inaan wax walba u sameeyo maaliyada Juve”.